WAX KA OGOOW HARAADIGII TIGREE 30 SANO HORTAAGNAA DAWALAD SOOMAALIYEED | Berberanews.com
Home QORMOOYIN WAX KA OGOOW HARAADIGII TIGREE 30 SANO HORTAAGNAA DAWALAD SOOMAALIYEED
Dani iyo Madoobahan daba socdaa waa haraadigii tigree siduu ku talaalayna dawladay ismoodaan labadan jifo reer cabdulle iyo maxamuud saleebaan marka labadan dawlo waa diidan dawlad soomaaliyeed!
Waxaa dalka ethiopia qabsaday jabhad Tigree ah oo kumidaysan urur labaxay TPLF 1991 dii. Hagaanka tplf waxa uu ahaa mid ku shaqeeya afkaaro guracan oo shisheeye dana aan u ahayn dalkooda ehtiopia. waxay xasuuq aad u foolxun u gaysteen qowmiyadaha dalkooda sida ahmara iyo oromo soomaali galbeedna warkeeda haba sheegin waxay dhib u gaysteen. waxay isku direen qawmiyadihii dalkooda oo dab dhex dhigeen. waxayna dalka keeneen fadaraal aan aduunkaba looga dhaqmin oo dhisaaya kaliya qawmiyada tigree,waxay dhaceen hantidii dalkaas ee ka dhaxaysay umada oo gaysteen tigree. waxay kala qoqobeen dadkii wadaniga ahaa,waxayna dileen ninkastoo lahaa aqoon oo iyaga aan ahayn ama ah wadani. qorshahoodu wuxuu ahaa in ay kala goo gooyaan dalka ehtiopia oo meeshaba kasaaraan iyagoo ku shaqaynaaya fikir shisheeye.Tigreegu waxay ahaayeen maafiyo naxariis aan aqoon oo dilaa ah,hankooduna lacag aruursi buu ahaa.tplf madaxda usaraysa unbaa malaayiin doolar haystay tigree shacab ahaan gaajaa tishay.hantaan intaa ku dhaafo tigree gii jabay.
Soomaaliya markay lumisay dawladnimadeedii 1991,dalkuna galay dagaalo sokeeye waxaa markiiba ina soo galay oo inaga faa iidaystay Tigree. waxay abuureen qabqablayaal dagaal,oo ay siiyaan talada iyo amarka iyo rasaastay isku gumaadi lahaayeen. tani waxay keentay in dalku dagi waayo dagaalada sokeeyana daba dheeraadaan.majiro nin dagaal ooge ahaa oo aan hub ka helin tigree ama aan hoostagin iyaga. waxay abuureen markiiba in gobolada waqooyi u jeexaan roodh maab ah in ay goostaan,oo soomaali inteeda kale ka go aan.
Waxaa 10 sanadood lagu jiray qub qac iyo dhiig daadanaaya oo aan soomaalidu iswaydiinba nasiib daro. hayeeshee sanadkii 2000 ayaa dawlad lagu dhisay dalka jabuuti,markiiba tigreegu waxay abaabuleen in ay dhisaan roodh maab,dagaal ooga yaashii,loogu xuub siibo dawlada yar yar oo leh calamo kala duwan oo ku salaysan qabiil,lana huwiye buste ah fadaraal. si loo burburiyo dawadii lagu dhisay jabuuti,oo aysan usoo noqon dawlad soomaaliyeed,waxayna ogaadeen in dagaal ooge aan dalka lagu sii haynkarin. waxayna 2004 sameeyeen dawlad fadaraal ah oo ku meel gaara oo loo sameeyay dagaal oogayaashii,waxaana garwadeen ka noqday puntland oo ahayd dhismihii maamul ee labaad marka laga reebo kan somaaliland oo tigreegu dhiseen. laakiin kan puntland waxaa loo dhisay in uu gaarsiiyo fariinta ah dalku waa fadaraal ah dawlado midii doontaana ay xor u tahay in ay godo markay doonto khiyaarkeed. arinkaana puntland waa fulisay.
Tigreega oo qudhiisu fulinaaya fikrado guracan oo dalal waaweyni kadanbeeyaan,oo dalkiisiiba u nixi waayay,ayaa inoo dhigay dabinka ah qabiilooyin dawlado is moodaaya oo la dirira dawlad soomaali ku midaysantahay oo dib usoo noolaata.macnuhu waxaa weeye dalka soomaaliya majirto dawlad laakiin qabiilooyin kala qoqoqoban oo dawlado ismoodayaa jira weeye bar dhamaadku.
Waxaad maanta aragtaan ahmed madoobe oo leh,ciidanka soomaaliyeed haka baxaan gedo? waa ka garaabaynaa hadii dawlada iyo dalka soomaaliyeed ciidankooda xoogu galo dalkale si sharci daro ah waana qabsan lahayn,hayeeshee waa dawladee dawlada ciidanka xooga soomaaliyeed uu galay xuduudeeda ee laga saarayo? goormay gedo noqotay dalkale? macnuhu waxaa weeye axmed wuxuu haystaa suntii lagu talaalay ee tigree oo ahayd reer cabdille waa dawlad layiraahdo jubaland adiguna madaxwayne ayaa tahay,markaa ninkani waa nin maskaxiyan dhintay xili hore,dawlad buuna isu haystaa!!!
Waxaa lamid ah oo kaba sii daran Dani oo isagu ku dhawaaqay waa go aynaa,oo ah wuxuu qarsanaayay ee tigree beeray una qoran,goni u goosadka waxa og inta kursiga puntland haysata 22 sanadood ee xiratay.waxaa kale oo jira siyaasiyiinta dalka kasoo noqday madaxweynayaal ee hada kamid ah golaha musharixiinta midoobay,mabaadiidaas tigree ayay ku shaqaynayaan waxay usocdaana maha dawlad nimo iyo dal ay xukumaan ee waa sideed ku heshaa marlabaad doolar,waana niman u khaadima shisheeye oo qaba fikirkaa tigree ee maafiyada ah.
Haraadigii Tigree cid aan ahayni ma diidana in dalkeenu yeeshe dawlad,nasiib wanaag illaahay ethiopia wuu ka dulqaaday maafiyadii tigree. waana jabeen dalkaasina waa xoroobay kadib markay gacan bir ah isaga qabteen oo sifeeyeen fikirkaa khatarta ah kuwii qabay. inaga wali kuwii laynugu dhexbeeray ayaa saamayn xoogan inagu leh,oo hada aad moodaa in iyagiina gabalkoodii dhacay. waxa inagu sii haray waa Dani iyo Ahmed madoobe oo diidan in dalku doorasho aado,diidan in dawlad soomaaliyeed shaqayso, diidan in dawlada dhexe xoog yeelato dalka hanato,diidan in mogdisho ahaato caasimada soomaaliya looga taliyo,waxaad ogtihiin in ay shacabka soomaaliyeed ka hor istaageen qorshihii dawladu u dajisay oo ah qof iyo cod oo shacabku wax doortaan,markii dawladu dhib farabadan kala kulantay curyaamin tooda dalka,ayay tanaasushay waxaana loo yeelay siday doonayeen oo ah in qabiil wax lagu doorto. 17 septeember waxaa dhacay heshiiskii weynaa ee ahaa sixiixayaasha isla ogol oo macnuhu ahaa dawladii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo ku heshiiyay doorashada 2021. heshiiskii SAXIIXAYAASHA EE ISLA OGOL DOORASHADA 2021 waxaa loogudbiyay labada aqal oo meel mariyay si cod aqlabiyad ah. heshiiskaa loogu magac daray SAXIIXAYASHA 17 SEPTEEMBER ISLA OGOL DOORASHADA 2021 halkaasaa lagu soo afjaray.
Laakiin nin shisheeye meel u fadhiyo oo aan xor ahayn maxaad ku taqiin,waxaa loo sheegay in ay kabaxaan heshiiskaas waayo dan uuguma jirto shishee yaha. marka maha niman go aan qaadan kara oo xor ah.markaa dadka soomaaliyeed iyo dawladooduba waa in la fahmaa haraadiga inagu dhex jira ee dalkeena lagu beeray 30 sanadood ee hartaagnaa in aan dawlad noqono iyo dal jira.wadana ma xor ma noqdo ilaa uu dib usocodka iyo shisheeye kalkaalka kasifeeyo dalkiisa.shacabka soomaaliyeed ha baraarugo waxaa lagu soo duulay diinteenii iyo dalkeenii iyo dawladnimadeenii waa in aan xoroownaa iska qabanaa kuwa midabkeena leh afkeena ku hadlaaya soomaali inala ah hadana kaxun cadawga shisheeye. waxay gadayaan dalkeena,waxay badalayaan diinteena,waxay kala goynayaan dalkeena. qofkastoo soomaaliyeed waxaa waajib ku ah difaaca dalkeena jeceelka dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena. dalkeenu waxa uu leeyahay 6 ceel oo caan ah oo shiidaalka ku jira aan isagoo kale hore dunida loogu arag baaxadiisa shiidaal sidaa daraadeed cadawbadan ayaynu leenahay kuwo qarsoon iyo kuwo muuqda.dalka aan ilaashano dawladnimo ayaynu ku ilaashan karaa oo kaliya.in aan afrika qabsano oo u talino ayaa la diidayaa oo dunida ka muuqano markaan lasoo baxno shidaalkeena.aduunka dhaqaala layku dilaa lasku dhaafay.
Sawir Xasuus taariikhi ah kuwa isticmaarku adeegsado oo beeciya diintooda dadkooda iyo dalkoodaba iyagoo dhaafsaday doolar.
Previous articleGorfayn Kooban Buugga-The Journey Of My Life- Q1aad
Next articleCanada oo Soomaalida ku tilmaantay inaanay ahayn madow sax ah